परवल खेती किन र कसरी ? | forestrynepal
परवल खेती किन र कसरी ? By SHREE BHAGAVAN ... - 6/25/2012
परवल काँक्रो समूहमा पर्ने बहुवर्षिय लहरे बाली हो । यसको बानस्पितक नाम Trichosanthes dioca Roxb हो । यसमा प्रोटीन, भिटामीन ए र सी, क्याल्सीयम, फास्फोरस र फलामको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसको उत्पत्ति बंगाल र असाममा भएकेा मानिन्छ । परवल मुटु र दिमागका रोगीहरुको लागी धेरै उपयोगी हो । यो सजिलैसंग पच्ने अरु तरकारीको तुलनामा पौष्टीक र स्वादिलो भएकोले तरकारीको राजा पनि भनिन्छ । यो एक पटक लगाएपछि ४/५ वर्ष सम्म फल दिन्छ । यो मुख्यत: वगर तथा बलौटे दोमट माटोमा खेती गरिन्छ । आजकल परबल करेसाबारीमा ८, १० बोट झाँगमा लगाउने चलन बढेको छ यसबाट जुनकुनै बेला आफूलाई चाहेको बेला टिपेर तरकारीमा खाने गरेको पाईन्छ ।
यसको भाले र पोथी फूल भएका छुट्टाछुट्टै अलग अलग बोटहरु हुन्छन् । यसको एउटा मुख्य जरा र अन्य जराहरु पनि हुन्छन् । लहरा पेन्सिल आकार भएका हुन्छन् । पातहरु गाढा हरियो र पानको जस्तै आकार भएका हुन्छन् । फूलहरु साना लाम्चो गोला र सेता रंगका हुन्छन् । जम्मा फूलहरुको ४०–७० प्रतिशतमा मात्र फल लाग्ने गर्दछ । परवलको पोथी बोटमा फूल लाग्दा बतिलासंगैका फूल लाग्छन् भने भालेबोटमा फुल्ने फूल सोली जस्तै बतिला विहिन हुन्छन । राम्रो बाली उत्पादनका लागी एक प्लटमा १०–१५% भाले बोट आवश्यक हुन्छ । यसको फूल रातको विहानी पख अथवा उज्यालो हुने समयमा फूल्छ र ६–१२ बजे सम्ममा पराग सेचन सम्पन्न हुन्छ ।
मानिसको लागि परवल पोषण, औषधीय एवं आर्थिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । परबलमा प्रोटीन र रेसाका अलावा खनिजतत्व एवं भिटामीन प्रचुर मात्रामा पाईन्छ । एक सय पचास ग्राम खान योग्य परबलमा देहायका मात्रामा खाद्यतत्वहरु पाईन्छ ।
परबल एउटा महत्वपूर्ण स्वास्थ्यबर्द्धक, पितनासक, सुपाच्य र मस्तिष्क एवं हृदयबर्धक तरकारीको रुपमा चिनिन्छ । परबलले कोलेस्टोरेल र रगतमा चिनी (सुगर) घटाउने काम गर्दछ । यो मुटु र मस्तिष्कको बिरामीलाई उपयोगी हुन्छ । परबललाई तरकारी, पकौडा, अचार, सुप बनाएर, परबलमा मसला र मासु समेत भरेर विभिन्न परिकारहरु बनाई खाने गरेको पाईन्छ । यसका अलावा राम्रो आय आर्जन गर्न परबल खेती कृषकहरुका लागि अति महत्वपूर्ण व्यवसाय बन्न पुगेका छन ।
यसको खेती गर्मी न्यानो र आद्र हावापानीमा राम्रोसंग गरिन्छ । तुषारो कम पर्ने वर्षा १०० देखि ११० से.मी. हुने क्षेत्र यसको खेतीको लागि उपयूक्त मानिन्छ । अतः नेपालको तराई तथा भित्रि मधेशमा यसको खेती गर्ने गरिन्छ । यसको लागी प्रसस्त वर्षा हुने र गर्मी तथा ओसिलो हावापानी पाइने ठाउँ राम्रो मानिन्छ । यसको बोट शरद र बसन्त ऋतुमा सुसुप्त अवस्थामा रहे पनि तापक्रम बढन थाले पछि पलाउन थाल्छ । चिम्टयाइलो बाहेक पानी नजम्ने तथा निकास भएको सकभर अग्लो ठाउं, बुरबुराउदो बलौटे र दोमट तर प्रसस्त मात्रामा प्रांगरिक पदार्थ भएको परबल खेतीको लागी उपयुक्त मानिन्छ । नदीले कटान गरी छाडेका भूभाग, नदी तटको माथिल्लो भाग तथा बालुवाले पुरेका बगर भागमा तराईमा प्रशस्तै खेती गरेका पाईन्छ ।
परवलको लहरा र फलहरु
नेपालमा परवलको अनुसंधान खासै नभइसकेकोले नेपालमा परवलका जातहरु सिफारिस भएका छैन । तर भारतका प्रचलित जातहरुमा फैदावाद परवल १ (गोलो धारीदार), फैजावाद परवल ३(लामो धारीदार), फैजावाद परवल ४ (लामो हरियो), स्वर्ण रेखा (लामो बेल्नाकार सेतो हरियो धारी), काजला, क्रान्ति र फैजावाद परवल ५ रहेका छन् ।
जमीनको तयारी र खाडल खन्ने
परवल लगाउनु पहिले सकभर चैत्र बैसाखमा जग्गालाई ३, ४ पटक गहिरो खनजोत गरी पाटा लगाएर समतल बनाउनु पर्दछ । माटेामा भएको घाँस झारहरु राम्रोसंग हटाउनु पर्दछ । त्यस पछि तोकिएको दुरीमा पर्ने गरी माटोको चिस्यानको आधारमा १, २ फीट गरिाइ र १ फीट गोलाइ भएका खाडलहरु तयार पार्नु पर्दछ ।
परबलको प्रसारण तथा बृद्धि
परवलको प्रसारण लहरा (वानस्पतिक तरीका) मार्फत गरिन्छ । लहरा छान्नका लिाग आफूले चाहेको जातको रोग कीराबाट मूक्त भएका ताजा र बढी उत्पादन दिने परबल बालीबाट ३, ४ मीटर लामो लहरा (प्रत्येक लहरामा कम्तीमा ८, १० गाँठो पर्ने गरी ) ल्याई १ फीट देखि २ फीट लम्बाई भएको ४, ५ फन्को घुमेको मुठो बनाउनु पर्दछ । यसरी मुठो पार्दा लहराको बनौट अंग्रेजी अंकको आठ ( 8) वा नेपाली अंकको चार (४) जस्तो बनाउनु पर्दछ । लहराको मुठो बनाउँदा पातहरु हटाएको हुनु पर्दछ ।
लगाउने दूरी तथा तरीका
पंक्ती देखी पंक्ती २ मी. तथा बोट देखी बोट १ मी. खाल्टो वा कुलेसोमा लहराहरु रोप्नु पर्छ ।
(क) खाल्टो खनेर : परवल लगाउनु पहिले राम्ररी खनजोत गरी माटोको चिस्यानको आधारमा माथि उल्लेखित दूरीमा १, २ फीट गरिाइ र १ फीट गोलाइ भएका खाडलहरु तयार पार्नु पर्दछ । प्रत्येक खाडलमा ५ कि.ग्रा.का दरले पाकेको मल र रसायनिक मल प्रति खाडल ५/५ ग्रा. नाइट्रोजन, फास्फोरस र पोटास राम्ररी लहरा रोपनु भन्दा १०दिन अगाडी मिसाउनु पर्दछ ।
(ख) नाला अथवा कुलेसो खनेर : गोलाकार बनाएका लहराहरुको दुबै टुप्पोहरु माटोको सम्पर्कमा ल्याई दुई तिहाई भाग माटो भित्र पर्ने गरी गाडिन्छ । यसरी रोपिएका लहरामा केही दिन पछि जरा तथा जमिन माथी रहेका भागबाट नयाँ टुसाहरु पलाउन थाल्छन् । उपयुक्त वातावरण मिल्ना साथ बढन थाल्छ । बगरमा परबल खेती गर्दा प्रायः यसै प्रकारले गरिन्छ । (ग) टाँड वा मचान बनएरः परवललाई घर नजिक टाँड बनाएर वा मचान बनाएर पनि उत्पादन गरिन्छ । यसले उत्पादन बढी दिनुका साथै झाँग भित्र छहारी रुचाउने बाली लगाएर ठाउँको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि १ मी. देखि १.५मी. चौडाई भएको १.५ मी. उचाईको टाँड बनाउनु पर्दछ र १.५ मी.को दुरीमा चौडाइ पटिबाट लहरा खाल्टो विधिबाट रोपी लहरा मचानमाथि हुर्काउनु पर्दछ ।
यसको विउ माघ देखि बैशाख सम्म रोपेर विरुवा उर्मान सकिन्छ । लहरा काटेर कलमि सार्ने हो भने भदौं देखि कार्तिक सम्ममा सारि सक्नु पर्छ । पुरानो राम्रो फल लाग्ने स्वच्छ विरुवाबाट कलमि गरेर यसको खेती गरिन्छ ।
विउ दर ६०० ग्रा. विउ प्रति कठ्ठा र १५०–२०० लहरा प्रति कठ्ठा चाहिन्छ । कलमि लहराको लम्बाई ५० से.मी. हुनुपर्छ र गोलो आकारमा बनाउनु पर्छ ।
लहरा लगाउने तरीका
माथि उल्लेखित(परबलको प्रसारण तथा बृद्धि) तरीकाबाट तयार गरिएको मुठाको माथिल्लो १ इन्च जमीन माथि छाडी बाँकी भाग पूर्व तयार खाल्टो वा कुलेसोमा माटो मुनि पर्ने गरी परबलको लहरा रोपनु पर्दछ । यसरी लगाउनाले प्रतिकठा १६५ देखि १७५ मुट्ठाहरुको आवश्यकता पर्दछ । लहरा लामो छ र चिस्यान ठीक मात्रामा भए लहराको बीच भाग मात्र पुरी दुबै तिर टुप्पो देखाएर पनि लहरा रोप्न सकिन्छ ।परबलको लहरा रोपेका १ देखि १.५ हप्तामा नयाँ पालुवा आउन थाल्छ । यो समयमा कुनै फूल फल लागेमा टिपी फाल्नु पर्दछ । चिसोले पुस माघमा आशिंकरुपमा वा पूर्ण रुपमा पातहरु सुक्दछ र फाल्गुनमा तिनीहरु पुनः नयाँ पालुवा आई त्यसबाट फुल र फल लाग्न थाल्दछ ।
भाले पोथी बोटको अनुपात
परबलको भाले र पोथी फूल छुटाछुटै बोटमा फुल्ने गर्दछ । परबल बालीको उत्पादन प्लटमा भाले र पोथी बोटको अनुपात मिलाउनु पर्दछ । यसको लागि जम्मा बोट मध्ये १० प्रतिशत (सयकडा १०) भाले बोट आवश्यकता पर्दछ । खेतमा प्रत्येक ९ बोट पोथी पछि १ भाले बोट लगाउनु पर्दछ । तर ठुलो खेत भएमा ५ देखि १० प्रतिशत भालेमात्र लगाउँदा हुन्छ ।
भाले र पोथी बोट छुटयाउने तरीका
भाले बोटः भाले बोटको एक गाँठ देखि अर्को गांठको दुरी लामो हुने पातहरु अलि चिप्लो हुने गर्दछ ।
पोथी बोटः पोथी बोटको एक गाँठ देखि अर्को गांठको दुरी नजिक हुने तथा पातहरु अलि खस्रो हुने गर्दछ ।
परवलको लहरा एक पटक लगाए पछि ४, ५ वर्षसम्म उत्पादन दिने भएकोले वार्षिकरुपमा निम्न बमोजिम प्रति कठा मलको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
प्रति कठा (किलो)
प्रति खाडल वा बोट
८०० - १०००
१३ – १५
पहिलो वर्ष खेत तयारीसंगै सम्पूर्ण कम्पोष्ट, डी.ए.पी. र पोटास तथा एक चौथाई यूरीया माटोमा प्रयोग गर्नु पर्दछ वा खाडलमा हाल्नु पर्दछ । बाँकी एक चौथाई यूरीया मंसीरको अन्तिम साता र बाँकी आधा भाग यूरीया माघ फाल्गुन तिर दिनु पर्दछ ।
दोश्रो वर्षदेखि पुरै गोबर मल, डी.ए.पी., पोटास तथा आधा यूरीया मंसीरमा र बाँकी आधा भाग ३ महिना पछि माघ फागुनमा दिनु पर्दछ । मल दिन विरुवाको वरिपरि गोलो बनाएर जराबाट ४५ से.मी. टाँढा दिनु पर्दछ ।
सिंचाइ र गोडमेल
यसलाई एक वर्षमा ३/४ पटक गोडमेल गर्नु पर्छ । सिचाईको व्यवस्था भएमा १०/१५ दिनको फरकमा पानी दिनु पर्छ । गर्मी महिनामा ८, १० दिनमा पानी दिनु पर्दछ । पानी बढी भएको अवस्थामा निकासको उचित व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
यसलाई काटछाट नगरे सानो र कम फल फल्ने हुन्छ । त्यसैले पहिलो वर्ष काटछाटको आवश्यकता पर्दैन तर फलेको पहिलो वर्ष मंसीरको दास्रो हप्ता देखी काटछाट गर्नु पर्छ । भुई देखि ३०/४० से.मी. सम्मको प्रमुख लहरालाई छोडेर बाकी लहरालाई काटनु पर्छ । त्यसैमा फाल्गुण देखी परवल फल्न शुरु गर्छ ।
टेका र छापो
परबललाई टेका दिनु राम्रो मानिन्छ । टेका अनुसार लहरालाई तालीम दिनु पर्दछ । अनुसंधानले भूइंमा छोडिएको लहरा भन्दा टेका दिई लगाइएको परबलमा बढी उत्पादन हुने प्रमाणित गरेको छ । तर भूइंमा पनि सफलताका साथ उत्पादन गर्न सकिन्छ । टेको व्यवस्था नभए जमीनमा नै खर, पराल, मकै गहुको ढोड, उखुको पात, आदिको छापो दिनु पर्दछ । छापोले चिस्यान बचाउने, फल एवं डाँठ कुहिने समस्याबाट बचाउने र प्रागांरिक पदार्थ पनि थपि दिने काम गर्दछ ।
परवलमा उचित व्यवस्थापनको कमिले रोग र कीरा दुबैले क्षति पुर्याउँछ । परबलमा खास गरी फल कुहाउने औंसा , डाँडमा गाँठो पार्ने कीरा र सेतो झिंगाले क्षति पुर्याउने भएकोले साइपरमेथ्रिन वा डेल्टामेथ्रिन वा इन्डोसल्फान २, ३ मि.ली. प्रति लीटर पानीको दरले स्प्रे १०, १५ दिनको फरकमा गर्नु पर्दछ । यसमा लाग्ने मुख्यतः फलकुहिने, डढुवा र धुले रोगको लागि क्रिनोक्सील १ ग्रा.वा ब्लाइटोक्स ५० वा बविस्टीन २ ग्राम प्रति लीटर पानीको दरले तथा खपटे किराको प्रकोप दखिएमा रोगर २ मि.लि.प्रति लीटर पानीको दरले राम्ररी भिज्ने गरी स्प्रे गर्नु पर्छ ।
परबलको फल साधारणतया फाल्गुण देखी कार्तिक सम्म उत्पादन दिन्छ । फल कलिलो अवस्थामा नै टिपि उपभोग वा विक्री गर्नु पर्दछ । उत्पादन रपलको अवस्था हेरी ४/५ दिनको फरकमा फल टिप्नु पर्ने हुन्छ । दास्रो र तेस्रो वर्षमा उत्पादन बढी उत्पादन हुन्छ ।
परवल पहिलो वर्ष ४, ६ क्वीन्टल तथा दोश्रो वर्ष देखि ६, ८ क्वीन्टल प्रति कठा उत्पादन दिन्छ । यसबाट प्रति कठ्ठा ८–१० हजार सम्म आम्दानी हुन्छ । पहिलो वर्ष कम तथा दोश्रो वर्ष देखि चौथो वर्षसम्म राम्रो उत्पादन दिन्छ, त्यसपछि घट्दै जान्छ । त्यसैले पहिलो पटक लगाएको बाली ४ वा बढीमा ५ वर्ष लगाउनु पर्दछ ।
खुटी तथा अन्तरबाली
परबल एक बर्ष उत्पादन लिए पछि अर्को कार्तिक मंसीर तिर लहरा सुक्न थाल्दछ । त्यसबेला सबै लहराको भूईं देखि १०, १५ से.मी. छोडी अरु भाग हटाई दिनु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार मल खाद दिनु पर्दछ । माघ फागुनमा पालुवा आए पछि आवश्यकता अनुसार सिंचाइ मल दिनु पर्दछ । चैत्रको मध्य तिर फल प्राप्त हुन्छ । यसप्रकार १ पटक लगाए पछि ४, ५ वर्ष उत्पादन लिन सकिन्छ ।
SHREE BHAGAVAN THAKUR Position
Agriculture Specialist Organization
UNDP/LRP View full user profile
Recent posts for Shree Bhagavan Thakur
Variability in Groundnut (Arachis hypogaea L.) to Cercospora Leaf spot disease tolerance
Genetic variabilty, heritabilty and genetic advance of podyield component traits of groundnut (Arachis hypogaea l.)
नेपालको लागि बहुउपयोगी रुख : आँप
तरकारी वालीमा लाग्ने रोग कीरा व्यवस्थापनमा रसायनिक विषादिको विकल्पमा वानस्पतिक विषादि
कपिलवस्तु जिल्लामा छाडा पशुपालनको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय
ओल खेतीको उन्नत प्रविधि शितल चिनी (सोहजन) अति उपयोगी बोट तथा यसका खेती प्रविधि
नेपालका लागि अति उपयोगी फल रुख कटहर
केरा खेती मध्यम किसानको लागि बरदान